We.com.mm - ညဆိုအန္တရာယ်များလို့မနက်မှလာမယ်ဆိုတဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့အကြောင်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖွင့်ချပြီ
ညဆိုအန္တရာယ်များလို့မနက်မှလာမယ်ဆိုတဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့အကြောင်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖွင့်ချပြီ
မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများအား အသိပေးတင်ပြခြင်းပါတဲ့ . . .
ပေါင်မြို့နယ်၊မှော်ဘီကိစ္စဖြစ်စဉ်သိပြီးချိန် ည 11:30 ကစလို့ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးကို ဖုန်းဆက်ခဲ့တယ်။
ကျနော်မှ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး နှင့်အဆက်အသွယ်ရပြီးမေးမြန်းချက်အရ (ဘုန်းကြီးကျောင်းထဲမှာရှိတဲ့အဖွဲ့ထဲက ဒဏ်ရာပြင်းထန်တဲ့သူတွေ ရှိနေတယ်။ လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေက၊ အဝေးကနေလာရောက်ကယ်ဆယ်ပြီး ဆေးရုံပို့ဖို့ရောက်နေပေမယ့်လည်း၊ အပြင်ကအဖွဲ့တွေက လူနာတွေကို ထုတ်ခွင့်မပေးပါ။ ဒါကို ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ကား ၄ စီးနဲ့ရောက်လာခဲ့ပေမယ့်လည်း အုပ်ချုပ်ရေးမှူး နှင့်တွေ့ပြီး ပြန်သွားပါတယ်။)
BGF တပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်က အခင်းဖြစ်တဲ့ဘက်တစ်ခုကနေ ပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့သိရသည်။
ည 11:50 မှာပကြိမ်ဖုန်းပြောပါတယ်။ နံက် 1:48 မှာဒုကြိမ်ထပ်ပြောပါတယ်။
“မနက်အာရုဏ်တက်မှ သွားမှရမယ်။ ဒဏ်ရာရထားတဲ့လူတွေကိုအသေးစိတ်လေးမေးပေးထားပါလို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကို ပြောခဲ့တယ်။ အဲမှာBGFအဖွဲ့ဝင်တွေလည်း ရှိနေတယ်။ မနက်ဖြန်ကျရင်စုဖွဲ့ပြီး ခရိုင်မှူးပါပြောပြီး ဆင်းမှရမယ်။”
“မနက်အာရုဏ်ပေါ့၊ ညဆိုအန္တရာယ်များလို့”။ အခု ကျနော်တို့တောင်မှ အခုသွားတော့ ဝိုင်းတာလေ။ ရဲကား ၄စီးတောင်။ အဲလိုလေး၊ အခက်အခဲလေးရှိလို့။”
ကျနော်မှ “အမှားအမှန်ကိစ္စက နောက်ရှင်းရမဲ့ကိစ္စပါ။ ဒဏ်ရာရလူနာတွေကအရေးကြီးတယ်။ အဖွဲ့လိုက်ဆိုရင် ရပါတယ်။ လိုအပ်ရင် တပ်ကို အကူအညီတောင်းပေါ့။ ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူ းတို့ လုံနယ်ဝန်ကြီးတို့ဆီ မတင်ပြဖူးလား? သူတို့မသိသေးဖူးထင်တယ်။” ဆိုပြီးကျနော်မှပြောလိုက်ပြီးနောက် conversation ဆုံးသွားတယ်။
ဒုပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး mobile စက်ပိတ်ထားသည်နှင့်ဆုံ။ ( နံက် 1:45) အိပ်ချိန်။
ဝန်ကြီးချုပ် Mobile ဖုန်းဝင်/မကိုင် (နံက် 1:52 ၊ နံက် 2:39) အိပ်ချိန်။
လုံနယ်ဝန်ကြီး mobile။ စက်ပိတ်ထားသည်နှင့်ဆုံ။ (နံက် 2:30) အိပ်ချိန်။
ရုံးဖုန်း/အိမ်ဖုန်း( နံက် 2:31/2:32) ဖုန်းဝင်/မကိုင်။ အိပ်ချိန်။
နောက်ဆုံးတော့ ရဲမှူးဦးစီး(ပ)ဦး/ရေး/ထောက် မှ ဒုရဲမှူးကြီးခင်မောင်စိုး- mobile ကိုင်သည်(နံက် 2:55)။ ၎င်းအားအခြေအနေပြောပြတိုက်တွန်းခဲ့သည်။ ဒုရဲမှူးကြီးမှ “ရဲစခန်းက လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ မြို့နယ်ကိုပြောလိုက်ပါမယ်” ဟုပြောပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီနိုင်ငံရဲ့ကံကြမ္မာဆိုးတွေ ကျနော်တို့စုပေါင်းတွန်းလှန်မပစ်နိုင်သရွှေ့ကတော့ ဆက်ခံကြရပေဦးမည်။
ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုစာအတွင်း အဆိုးရွားဆုံးဖြစ်လာတဲ့ အမေရိကန်က အအေးလွန်ကဲမှု
ကြက်သီးထ မျက်ရည်ဝဲလောက်အောင်ကို ကောင်းမွန်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတိုလေး